युगसम्बाद साप्ताहिक - अनुशासनहीताले आर्थिक समस्या !
Thursday, 04.09.2020, 07:02pm (GMT+5.5) Home Contact
अनुशासनहीताले आर्थिक समस्या !
Monday, 08.22.2011, 03:28pm (GMT+5.5)
परनिर्भर रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनुशासनहिताले ठूलो समस्या खडा गरेको छ । औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र ओरालो लाग्दै गर्दा मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिंदै गरेको अर्थविद्हरूले जति चिच्याए पनि सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । व्यक्ति स्वार्थको तुवालोले राष्ट्रिय स्वार्थमा पर्दा हालेको छ । भएका उद्योगधन्दाहर धमाधम बन्दै भैरहेका छन् । राजनीतिक दलका भातृ संस्थाका रुपमा गठन भएका मजदुर संगठनहरू आफ्नै पेटमा लात मार्दै विरोधमा उत्रिने क्रम रोकिएको छैन । बेरोजगार भए पनि उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन । अस्ति भर्खरै विदेश निर्यात गर्ने तयारी पोशाक उत्पादन गर्दैआएको सूर्य नेपाल प्रा.लि. मजदुर समस्याकै कारण बन्द भयो । यो चरम अनुशासनहीनताको परिणाम हो ।
औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन वित्तीय क्षेत्रमा पनि अनुशासनहीनता बढ्दै गएका कारण आर्थिक समस्याको जालो फैलिदै गएको छ । व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको पूँजी उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदैगएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गलत निर्णय र गलत कामका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला धराशायी हुने चिन्ता जागृत भैरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वनियममा नबसेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक गतिविधि नियाल्न नसक्ने बताउँदै उनीहरू नै नियममा बस्न सके मात्र समस्या नआउने बताउनुभएको छ ।
नेपालको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सहयोगमा निर्भर छ । राजश्व उठ्तीले कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि पुग्दैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमको ८० प्रतिशत खर्च उपभोग्य वस्तुमा भैरहेको छ । सरकारले सो रकमको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना नै बनाउन सकेको छैन । सबा दुई खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिन्छ तर त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरूबाट जनताको पैसा राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्न खर्च गरिरहेका छन् । अर्कोतिर लगानीको नाममा गाडी, मोटरसाइकल लगायत विलासी वस्तुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जति सहजताका साथ ऋण उपलब्ध गराउँछन् उद्यम गर्न चाहनेका लागि त्यति सजिलो छैन । उनीहरू कसरी थोरै समयमा धेरैभन्दा धेरै मुनाफा गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर शेयर बजारमा आफ्नो स्तर उकास्ने र जनताको पैसा लुट्ने भन्ने ध्याउन्नमै रहेका हुन्छन् ।
अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । विगतमा निर्यातकर्ताको संख्या जति थियो त्योभन्दा दशौं गुणा बढी अहिले आयातकर्ता थपिएका छन् । जापानमा विदेशबाट सामान आयात गर्ने जति छन् त्योभन्दा बढी नेपालमा छन् । यसले स्पष्ट गर्छ कि हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशातिर जाँदैछ ? दुई दर्जनभन्दा बढी खुलेका वाणिज्य बैंक, दर्जनभन्दा बढी विकास बैंक तथा सयौंको संख्यामा रहेको फाइनान्स कम्पनी र हजारौं बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले गर्ने लगानीको क्षेत्र भनेको सवारी साधन, घरजग्गा, विद्युतीय उपकरण नै हुने गरेको । उनीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना नै बनाउन चाहिरहेका छैनन् । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्र अग्रगामी हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंक नै मुलुकको आर्थिक स्थिरताप्रति विश्वस्त देखिंदैन । बारम्बार तरलताको अभाव भैरहेको छ । यतिबेला यो समस्या केही कम भए पनि यो क्षणिक मात्र भएको र पुनः त्यस्तो समस्या उत्पन्न हुने राष्ट्र बैंकले बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वनियममा बसेर मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरी लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नेतिर लाग्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जनतामा उद्यमशीलता जगाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन् तापनि उनीहरू त्यो दिशातिर अग्रसर नहुँदा मुलुकमा विदेशबाट भित्रिरहेको पूँजीको ठूलो अंश विदेशतिर गैरहेको छ ।